Day: Oct 10, 2018 - Vernac News
By Vernac News on Oct 10, 2018 • ( Leave a comment )
Gqr. Sebolelo Mokapela Namhlanje kwiYunivesithi yaseNtshona Koloni bekubanjwe umsitho wokuqala ofundisa ngoomakhwekhwetha boncwadi lwesiXhosa. Isifundo sokuqala sihlohlwe nguMyezo Litha Jolobe ongumzukulu wongasekhoyo uJJR Jolobe. Ungazibukelela apha esi sifundo. uGqirha Sebolelo Mokapela ubhale […]
I-EFFSC inkqenkqeza phambili kunyulo e-CPUT
EKapa – Umbutho wabafundi oyinxalenye ye Economic Freedom Fighters unkqenkqeza phambili kunyulo lwebhunga labafundi kwiikhampasi ezimbini zaseCPUT. Iziphumo zekhampasi iMowbray zibonakalisa ukuba abagqatswa beliqela baziphumelele zonke izihlalo. Zife namthanyana inzame ze South […]